Factorylọ ọrụ China Hay Cover factory na ndị na-emepụta | ShiningPlast
A na-eji akwa mkpuchi na-emepụta ShiningPlast Hay kpuchie akwa akwa 200-400gsm UVI mesoro akwa akwa. You've gụchaa ha, kpoo mkpoko gi megide ihu igwe oge oke ya. Ihe mkpuchi a ga - enyere gị aka ịchekwa ahịhịa ndị ọzọ ma gbochie ụkọ nri.
Hay Tarps nwere nnukwu ọrụ dị ike, na-eme ka ike sie ike nke bụ UV na-eguzogide ma bụrụkwa nke kachasị mma dị ka ebe a na-eme Ugbo. Ngwunye poly bụ UV na-eguzogide ma dị oke mma maka ọrụ ugbo maka ịkọ ahịhịa na mkpuchi. N'ọnọdụ ụfọdụ ịkwụ ụgwọ onwe ya n'ime otu afọ. A na-eji ike dị elu, akwa a kpara akpa kpuchie ya na seams na-ekpo ọkụ maka ike mgbanwe na iguzogide ikuku. A na-etinye eyelets na webbing n'ime akwa 4, na-enye ihe dị ka paịnd 500 nke ike na-adọta, na -eme ka ike dị ogologo.
Nha 1.5Mx2M ~ 20Mx50M
Strong siri ike ma dịgide: mkpuchi PE Hay dị elu ma sie ike ikpuchi ahịhịa gị.
UV UV-Resistant: Anyị jiri ọgwụgwọ UV na njigide ya kachasị mma iji hụ na njigide n'oge oge ekpughere ogologo oge UV n'oge oyi ma ọ bụ n'okpuru ihu igwe kachasị njọ.
Nke gara aga: Pgbọala gwongworo
Osote: Mkpuchi ụlọikwuu